Jamaahiirta Manchester United oo caro xoogan ka muujiyay heshiiska cusub uu saxiixay Chris Smalling – Gool FM
Jamaahiirta Manchester United oo caro xoogan ka muujiyay heshiiska cusub uu saxiixay Chris Smalling
Dajiye December 16, 2018
(Manchester) 16 Dis 2018. Taageerayaasha kooxda Manchester United ayaa muujiyay sida ay kaga careysan yihiin talaabada ay qaadeen maamulka Red Devils, taasoo ah in ay ka saxiixdeen Chris Smalling heshiis cusub ee gaarsiisan saddex sano iyo bar kale.
Dhinaca kale heshiiska uu qeyb ka ah in Chris Smalling uu ku dasan karo heshsiis sanad kale ee dheeri ah uu kusii joogi karo kooxda Manchester United.
Manchester United ayaa war rasmi ah ay arintan kasoo saartay waxay ku sheegtay:
“Manchester United ayaa ku faraxsan inay ku dhawaaqdo in ay qandaraaska u kordhisay Chris Smalling, kaasoo uu kusii joogi doono kooxda ilaa iyo 2022, iyadoo sidoo kale uu ku darsan karo sanad kale ee dheeri ah”.
Laakiin wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in jamaahiirta kooxda Manchester United aysan ku farxin heshiiska cusub uu saxiixay Chris Smalling.
Jamaahiirta Red Devils ayaa waxay dhinaca kale ka dalbadeen maamulka sare ee kooxda in Chris Smalling gabi ahaanba laga fasaxo kooxda suuqa furmi doono bisha janaayo ee soo aadan, si loo sameeyo saxiixa difaac cusub ee isaga ka fiican.
Allegri oo ka hadlay guushii ay xalay kaga gaareen kooxda Torino kulankii adkaa ee Turin derby
EEG SAFKA uu caawa ku soo gali karo macalinka kooxda Barcelona Valverde kulanka adag ee Levante